Ilayisi nama-chanterelles | Ikhishi Recipes
UMaria vazquez | 25/12/2021 10:00 | Amakhowe Ungadliwa
I-chanterelle iyikhowe elidliwayo elitholakala eduze kwe-holm oak noma i-oki futhi elithatha amagama ahlukene kuye ngendawo yendawo. Ibonakala ngombala wayo ogqamile, iyisithako esihle kakhulu sokuyilungisa isitshulu, ama-casseroles namasoso. Futhi uma nawe unayo irayisi njengaleli rice nama-chanterelles.
Isikhathi se-Chanterelle eSpain kusentwasahlobo nasekwindla. Ungazithola njengamanje emakethe ngamanani aphusile. Ngeke udinge abaningi ukulungisa leli rayisi kubantu abane; ngesigamu sekhilo uzoba nokungaphezu kokwanele.
Kuleli rayisi kumele ube nesandla esivulekile ngenani lamakhowe. Ngaphezu kwalokho, manje nonke nizobe senihlolile izikhathi ezingaphezu kwesisodwa ukuthi amakhowe ancipha kanjani uma esephekiwe. Bahlala ngaphakathi na, ukuthi umama uzothini. Ezinye izithako zaleli rayisi zilula kakhulu: u-anyanisi, i-leek, upelepele obomvu notamatisi. Ingabe sizoqala ukukulungisa?
Leli rayisi elinama-chanterelles lilula futhi liyashesha ukulungiselela. Ilungele ukudla komndeni kwangempelasonto.
400 g. ama-chanterelles
2 izinkomishi zerayisi
Izipuni eziyi-2-3 zikatamatisi ochotshoziwe
Ingcosana yokufaka umbala wokudla (uma uthanda)
6 izinkomishi abilayo inkukhu umhluzi
Sika u-anyanisi, i-leek kanye nopelepele, oqoshiwe futhi gazinga ngosawoti omncane kanye nopelepele epanini elinezipuni ezi-3 zamafutha imizuzu eyi-10.
Ngemuva kwalokho engeza ama-chanterelles futhi gazinga imizuzu embalwa ngaphambi kokwengeza irayisi.
Sinikeza irayisi imijikelezo embalwa futhi ngokushesha ngemva kokuba sengeze utamatisi, umbala wokudla kanye nomhluzi wenkukhu obilayo bese uxuba.
Sibeka isivalo futhi pheka imizuzu engu-6 phezu komlilo ophakathi nendawo. Khona-ke, sehlisa ukushisa ngenkathi sigcina amathumba bese sipheka singamboziwe eminye imizuzu eyi-10.
Ngemuva kwemizuzu engu-10 sicisha umlilo, Sisusa i-casserole kuso bese simboza irayisi ngendwangu ukuze iphumule imizuzu emi-5.
Sikhonza irayisi nama-chanterelles asanda kwenziwa. Uma unokuthile okusele, ungakugcina esiqandisini esitsheni esingangenisi umoya kuze kube yizinsuku ezimbili.
Indlela ephelele ye-athikili: Inicio » Izitsha » Amakhowe Ungadliwa » Ilayisi nama-chanterelles